Margarekha प्लास्टिकका भाँडा प्रयाेग गदै हुनुहुन्छ भने निम्त्याउँदैछ गम्भीर खतरा ! – Margarekha
प्लास्टिकका भाँडा प्रयाेग गदै हुनुहुन्छ भने निम्त्याउँदैछ गम्भीर खतरा !
प्लास्टिक भनेको तरकारी बोक्ने झोला मात्रै होइन । प्लास्टिकबाट बनेको भाँडा, मेलामाइन वा सेरामिक्सको भाँडाका बाहिर लगाइने रसायन पनि यस्तै प्रकृतिका हुन् । यसर्थ यस्ता भाँडाहरूको प्रयोगमा कमी ल्याउँदै हाम्रो भविष्य स्वस्थकर र सुरक्षित बनाउनु जरुरी छ । यदि अहिलेकै अवस्थामा प्लास्टिकको भाँडाको प्रयोग बढ्दै जाने हो भने यसले ल्याउने हर्मोनल चेन्जका कारण आगामी पुस्ताहरू अहिलेको भन्दा फरक देखेर मान्छे नै हो कि होइन भन्नेसम्म पनि नपुग्ला भन्न सकिन्न । राताेपाटीबाट
२६ बैशाख २०७६, बिहीबार ०८:२९ प्रकाशित